SingForYou.net - Lann Sone
Tags : lan sone ( Minkha~!)
By : Minkha on Jan 24, 2010
Score: 135 Rating: 5.00 Comments: 30
Lann Sone's Description
ပြန်ဆုံနိုင်ဖို့ မရှိ်နိုင်တော့ပေမဲ့........... ကျနော် သူ့ ကို လွမ်းနေတုန်းဆိုတာ သူ သိစေချင်တယ်ဗျာ..... သည်းခံပြီးအားပေးကြတဲ့...... SFY က ညီအကို မောင်နှမ များ အားလုံး ကို ကျေးဇူးပါ................ မင်းခ~!
feel on Mar 15, 2010 0
kg te byar
rainmouse on Feb 27, 2010 0
နားထောင်လို့ကောင်းတယ်ဗျာ....................***** for you ko Min kha
lovercreater on Jan 26, 2010 0
အားပေးသွားတယ် ဝေးလ်.... အရမ်းဂွတ် သူငယ်ချင်းရေ... *******************
punttatkaya on Jan 25, 2010 0
bro G ayan mite tel ...series htote par lr...:P.... pauk ng tel....:P...nyi arr pay twr tel naw
susannyunn on Jan 25, 2010 0
bro g.... u lookz so emotional.....seriouzzzz??,, lwann nay dong so tar ti lite par tot bro g yelz "thu" yay...susan su tg pay lite te nawt...bro g.....:pray.. awesomeeeeeeee!!!!....:clap :clap :clap...>>>>>>
u4gyi on Jan 25, 2010 0
Bro.. Ko Minkha.. so cool and nice ti listen.. ber byar.. so htar der good ber del.. 5***** (u4gyi) ar pay nar sin twar ber de..:::)))
sithunaung on Jan 25, 2010 0
~~~ so cool to listen bro minka.. arr pay ner sin twer per tal...5***** :)))
thant on Jan 25, 2010 0
kan ma kone yin pyan sone mhar par minkha yay........arr ma short nae.......mood apyi nae.....ayann ko kg par tal....*******
chan2008 on Jan 25, 2010 0
ဟာ.... ဘိုဘိုကြီး နယ်သားပါလား... အဖြုရောင်နဲ့... ဘိုးဘွားရိပ်သာ က.. uniform နဲ့တူတယ်.... အရမ်းကောင်းတယ်... နည်းနည်း စိတ်ဆိုးနေလားမသိဘူး.. စိတ်လျော့နော်... ဘယ်သူမှ... လမ်းဆုံမှာ.. မနှောက်ယျက်ပါဘူးဗျာ.. စိတ်ချ... လမ်းဆုံမှာ မရှက်ဘူးလား... လူတွေလိုက်ကြည့်နေဦးမယ်... အီး.. ကျွန်တော်တို့ လမ်းဆုံမှာ တော့... လူတွေများတယ်ဗျ.. နယ်သား... south okkalapa မှာ မဟုတ်ပါဘူးနော်... ဟုတ်ရင်.. ကျွန်တော် နည်းနည်းသိမှာ... ဟီးဟီး... ဆေးလိပ်သောက်ဖို့ သီချင်းက စာသားများတယ်နဲ့တူတယ် ကောင်းတယ်.. ကောင်းတယ်.. သူသိသွားအောင်.. ဆိုထားတာပေါ့... အော်... ဒီလိုလား အထာတွေနဲ့... ဆက်ဆက် ဆိုပါဗျာ... ကောင်းတယ် ကျွန်တော်တောင် ယောင်္ကျားဖြစ်ချင်လာပြီ... တခါတလေ မိန်းကလေး ဆိုလို့မရဘူးလေ... အင်း အားပေးသွားတယ်... စိတ်လည်းမဆိုးနဲ့ ချစ်ခင်လို့ စတာ.. နော်... နယ်သူ..
ko Minkha top ka top mike pee yin mike pal........ko minkha yae guiter nae so htar tae song layy lal mike tal naw.....YOMEO nae JUILET so lar bar so lar pae..........
A yan kaung par tal Minkha yay....54u
really nice to listen bro, *****
achitsonethu on Jan 24, 2010 0
so twar tar ayan kg par tal chint ar pay nay par tal nor :)))
tharnge123 on Jan 24, 2010 0
Moodapyae ne' so htar tar ,ayan kaung tal bro yay ************************************
emerald on Jan 24, 2010 0
ဒီသီချင်းလေးကို အရမ်း ကြိုက် တယ် ဆိုထားတာလဲအရမ်းကောင်းတယ် ဇော်ပိုင် အတိုင်းဘဲ5**********ပါ bro
mrcastle on Jan 24, 2010 0
ဒီသီချင်းလေးဆိုလိုက်တော့ လွမ်းနေတုန်းဆိုတာ သိသွားမှာပါ ။ လမ်းဆုံမှာ ရေစက်ကုန်ခဲ့ပေမယ့် လမ်းကွေ့မှာပြန်တွေ့နိုင်ပါသေးတယ် :P်fighting bro!!!!
thuyeekg on Jan 24, 2010 0
a yan kg par tel bro.. nice as usual... 5* :))))
nway on Jan 24, 2010 0
very nice ..5 star
koaungkhaing on Jan 24, 2010 0
အော်...ညီလေးရဲ့ အင်တာနက်ကတဆင့် လူသိရှင်ကြား လွမ်းကြောင်းပြောနေရသလား.. အီးမေးလ်ပို့လိုက်ပါတော့လား...နောက်တာ ကောင်းလှပ်ါတယ် ညီလေးမင်းခ..
လွှတ်ကောင်းဗျို့ ....5 for you
kaung tal nyi taw yae...
raj on Jan 24, 2010 0
Bro yee your voice is cool. singing cool. And also you are looking cool. Plz sing more..*****4cool man. raj
whitekisslay on Jan 24, 2010 0
``Face layy lae see ya ! so twer tar lae tagal ko khan sarr chat tayy ne so twer tal nor....Ayann nhit thet te song layy 1pote par pal....pyae sone twer par p....P.S..do not smoking ...:D...******************for ko Minkha.....:))))))))))))
ရုပ်မြင်သံကြားလေးရေ...ကောင်းနေပြန်ပါပြီ.. ပက်ပက်စက်စက်အားပေးသွားတယ်..ဟေ့ :) *********** naw
Paul on Jan 24, 2010 0
၀ိုးးး အရမ်းကောင်းတာပါပဲ မင်းခရေ..မုဒ်အပြည့်နဲ့ဆိုသွားတာ ရှယ်ပါပဲ.၀ါသနာတူ မောင်နှမတွေမို့ အမြဲအားပေးနားဆင်လျှက်ပါ။ အားပေးသွားပြီနော်.